Sakafo ho an'ny zaza mandritra ny volana maro manomboka amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny herintaona
Baby sakafo 10 volana
Sakafo ara-pahasalamana: 10 volana. Ny fikarakarana zaza folo volana dia efa voamarika fa misy karazan-tsakafo maromaro nampidirina tsikelikely tamin'io vanim-potoana io. Ny tanjonao dia ny mampiditra ny fisainana ary manatsara ny sakafon'ny zazakely, amin'ny fampiasana safidy maro ho an'ny fanomanana azy ireo. Ny fampinonoana dia mitohy amin'ny fomba fifohazana - matory (farafaharatsiny roa). Ny vokatra vaovao dia voankazo sy legioma araka ny vanim-potoana. Fa raha ilaina ny mamafy voankazo ...
Baby sakafo 10 volana Read full »
Baby sakafo 9 volana
Sakafo ara-pahasalamana: 9 volana. Amin'ny sivy volana, mbola mendrika sy mahasoa ny rononon-jaza, fa tsy any amin'ny toerana voalohany intsony. Manohy mamantatra ny sombiny amin'ny vokatra vaovao isika. Ampidiro ny trondro. Tsara kokoa ny mampiasa trondro misy menaka matsiro avy amin'ny orana (pollock, hake, cod) na renirano (pike perch, carp). Sasao ny trondro amin'ny rano mangatsiaka ary aza manala azy alohan'ny hanina, satria ...
Baby sakafo 9 volana Read full »
Baby sakafo 8 volana
Sakafom-bovidia: 8 volana Amin'ny valo volana monja, afaka manolo ny sakafo rehetra miaraka amin'ny sakafo matanjaka ianao, fa tsy tokony handoa ny tazomoka mihitsy. Tsara ny mandao ny sakafo maraina sy hariva amin'ny fampinonoana. Amin'ny volana 8 dia azonao atao ny manamboatra tsaramaso sy voankazo samihafa miaraka amin'ny voankazo na voankazo voankazo. Mofomamy amin'ny ronono, rano na ...
Baby sakafo 8 volana Read full »
Baby sakafo 7 volana
Ny sakafo ara-pahasalamana: 7 volana isam-bolana. Ny zaza amam-behivavy dia karazana karazana sakafo hafa, ary sarotra kokoa izany. Manomboka manandrana fary, hena ary trondro madio, cracker, bisikitra, mofo. Ny fanoloran-kevitra fototra momba ny fampidirana ireo sakafo fanampiny dia mitoetra ho mitovy: - gradualness; - amin'ny fotoana iray hampiasa karazana vokatra vaovao mba hahafahanao mamantatra tsara ny fihetsiky ny vatan'ny ankizy (ny ...
Baby sakafo 7 volana Read full »